Moriinoon leenjisummaan olitti maaliif gita addunyaatti gurra horate? - BBC News Afaan Oromoo
Moriinoon leenjisummaan olitti maaliif gita addunyaatti gurra horate?
22 Sadaasa 2019
Image copyright Tottenham Hotspur
Goodayyaa suuraa Joozee Moriinoo
Addunyaa kanarraa leenjisaan kubbaa miilaa cimaafi beekamaa eenyudha jettee yoo namoota hedduu gaafatte, shakkii tokko malee namoonni Joozee Moriinoodha jedhu.
Joozee Moriinoo leenjisaa kubbaa miilaa irra darbuun sadarkaaa idil-addunyaarratti nama gurra guddaa horatedha.
Leenjisaan Liiverpuul yeroo ammaa Jergeen Kilooppiifi kan Maanchester Siitii Peep Gaardiyoolaa dhiyeenya kana keessa Ingilaand keessati milkaa'ina gaarii fidaniiru. Haata'u malee, milkaa'inni isaanii kun akka Moriinoo uummata biratti beekkamtii guddaa hin gonfanne.
Kun beekamaadha, Moriinoon akka beekamaniif sababa kan ta'e milkaa'ina kubbaa keessatti argamsiisanidha. Seenaa kubbaa miilaa keessatti milkaa'ina yeroodhaa gara yerootti inni argataa jiru beekamtiin Moriinoo akka guutummaa addunyaarratti babala'tu taasiseera.
Moriinoon leenjisaa Tootinhaam ta'e
Guddina Kubbaa miilaa dubartootaa
Morniino kanaaf yeroo ammaa akka leenjisaa kubbaa miilaa tokkootti, akkuma Jergen Kilooppiifi Peep Gaardiyoolaatti qofa kan ilaalamu miti.
Joozee Moriinoo amma leenjisaa kubbaan olitti addunyaatti beekamaadha.
Sababiin isaa akka itti aanutti tarreeffameera.
Inni nama gurra ergachuutti beekudha
Goodayyaa suuraa Moriinoofi Boobii Roobsan
Bara 2004 Moriinoon miira keessa galee dirree keessa seenuun wanta inni agarsiise namoonni baayyeen ni yaadatu. Taphni kun yeroo Poortoo, Oold Tiraafoord irratti Maanchester Yunaayitidiin mo'achuun Shaampiyoonsi Liigii keessaa itti baase ture.
Yeroo sanatti kootii gurraacha dheeraa jilbaan ga'e, mataa isaa ammoo akka addaatti muratee dirree walakkaarratti yeroo inni miira isaa ibsatu namoonni argan hanga har'aatti yaadatu.
Suurri guyyaa sanaa akka Moriinoon beekamaa deemu gumacheera. Rifeensi isaa yeroodhaa gara yerootti harra'aa deemuun bifa jijjiiratulleen waan baayyeedhaan Moriinoon bareedaa akkuma ta'een itti fufee har'a ga'eera.
Image copyright BJORN LARSSON ROSVALL
Goodayyaa suuraa Joozee Moriinoo jechama 'Baasii dhaabuu' jedhu uumuun beekama
Moriinoon bifa isaa qofaan miti kan beekamu, jechoota dubbatuunillee ni beekama.
Jechoota akka fakkeenyaatti "Ani nama addaati" ("the Special One") jedhuun ni beekama. Amma akka jedhu nama addaa ta'uu baatus akkas ofiin jechuunis beekameera.
Moriinoon Afaan Inglizii afaan hadhaasaa ta'uu baatullee, sirriitti ittiin hojjechuurra darbee jechoota hin dagatamne akkasii kana waggoota 15 irraa kaasee uumeera.
Istaadiyamii kubbaa miilaa bosonatti jijjiirame
'Faddaalaa' dureessa kubbaa miilaa Awurooppaa sochoosu
Jechama 'Ani adda' jechu kana kallattiidhaan ofiin hin jenne. Garuu yeroo Chelsii leenjisaa turetti komii isaraatti ka'uuf ibsa gaazexeessummaa yeroo kennutti "maaloo gaalessa/ofittoodha na hin jedhiinaa" jechuun, ani nama Shaampiyoonaa Awurooppaa ta'e waan ta'eef "ani nama addaati" jechuun haala keessatti dubbate.
Namoonniifi miidiyaaleen garuu keessaa baafatanii "Ani Adda" jedhe jedhu.
Geezexoonni Biriitish mata duree isaaniirratti wanta akkasii jallatu.
Jechama biroo Moriinoon uume, "Atoobisii fidanii dhaabuu" kan jedhudha. Kanas sarara ittisaa jabaataa ijaarrachuun milkaa'ina kubbaa miilaa keessatti waan fiduuf jedhee amana.
Moriinoon tooftaa kanaanis hedduu milkaa'eera. Kana kan jalqaba dubbates, yeroo Chelsii leenjistutti Tootinhaam waliin taphatanii 0-0 galmeesisuun booda dubbate.
"Atoobisii fidanii dhaabanii" ("park the bus") jedhe. Kana jechuun dirree seenuun haleeluu caalaa ittisuurratti fuulleffachuu akka jechuudha.
Moriinoon yeroo mo'amuun qabxii dhabutti jechawaan akkasii uumee dubbachuudhaan qeequmsa isarratti ka'u dagachiisuu sirriitti itti beeka.
Kana qofaa miti, yeroo gara garaatti dubbii inni dubbatu kan hin dagatamnedha,
Image copyright Serena Taylor
Leenjistoonni kubbaa miilaa tokko tokko yeroo miira dirree kubbaa keessatti mo'uunis ta'e mo'amuun itti dhaga'amu ni dhoksatu ykn of qabu. Kanaaf ammoo fakkeenyi gaariin leenjisaa Arsenaal duraanii Arsen Wiingeridha.
Joozee Moriinoon garuu leenjisaa amala akkasii qabu miti.
Moriinoon faara fuula isaarratti jijjiiruunis ni beekama. Yeroo gammadu fuulaan ni ibsata, yeroo haarus fuularratti ni argama, yeroo miira addaa keessa ta'u fuulli isaa waan himu ni qaba.
Kana jechuun, Moriinoon taateewwan adda addaa keessatti kennaa fuulaan ibsachuu qaba.
Yeroo ammaa kana namoonni karaa miidiyaalee hawaasummaa ergaa gabaabaa waliif dabarsuuf viidiyoowwan gaggabaaboo miira adda addaa agarsiisan Moriinootiin hojjetaman fayyadamu.
Goodayyaa suuraa Joozee Moriinoofi Paawool Pogbaa
Moriinoon wanta biraa ittiin beekamu keessaa akkamitti akka waa'ee isaa odeeffamu gochuu ni danda'a
Yeroo hedduu taatee ispoortii keessatti dhalatu keessatti waa'een isaa akka odeeffamu gochuu ni beeka.
Yeroo gara dhumaa Maanchester Yunaayitid keessaa bahuuf jiru Paawool Pogbaa waliin walitti bu'anii turan. Yeroo sanatti akkamitti miidiyaalee hawaasummaa dabalate akka itti fayyadamaa ture namoonni ni yaadatu.
Wanti akka Moriinoon biyya Ingilaandiin jaallatu taasise tokko faayidaa miidiyaa kanaati. Yeroo jaallatamus ta'e yeroo jibbamu, yeroo qeeqamus ta'e yeroo jajamu miidiyaarrraa waan hin dhabamneef ni jaallata.
Diraamaafi miira jiru sana Moriinoon ni jaallata. Kubbaa miilaa yeroo miidiyaa waliin miira walitti horaa deemu miidhaga jedhas. Walumaa galatti Moriinoon qalbii hawwachuu jaallata.
Hawaasnis immoo qalbii ni kennaafi.
Taphataa Kubbaa Miilaa Afriikaa Baranaa
Kubbaa Miilaa Adduunyaa
Joosee Moriinoon, Pochetiinoo bakka bu'uun leenjisaa Tootinhaam ta'e
20 Sadaasa 2019
Kubbaa Miilaa Dubartoota Addunyaa: Guddina Kubbaa miilaa dubartootaa
Miinoo Raayoolaa: 'Faddaalaa' dureessa kubbaa miilaa Awurooppaa sochoosu
Viidiyoo ''Dubartoonni ispoortii kamirrattuu yoo hirmaatan argee hin beeku''
17 Onkololeessa 2017
Poolisootni lama shakkamtoota to'achuf bahan ajjeefaman
Tiraamp aangoorraa buusuuf himanni banamuufi
Shamarree wajjira 'Microsoft' Afrikaa Bahaa hoggantu
Shamarree miidhaa irra gaheef himannaa demaa turte ibiddaan gubamte
Nageellee Arsiitti adurreen yaala baqaqsanii wal'aanuun dhalte
Talaalliin taayifooyidii haaraan wayi jijjirama qabaa laata?
Bidiruun dhidhimuun godaantoonni namooti 57 du'uun himame
Huawei Ameerikaarratti himannaa haara bane